Maraykanka oo shaaciyey Qoraalo uu lahaa Osama Bin Ladin oo horey uga sii digay aasaaska Daacish | Gaaloos.com
Home » News » Maraykanka oo shaaciyey Qoraalo uu lahaa Osama Bin Ladin oo horey uga sii digay aasaaska Daacish
Maraykanka oo shaaciyey Qoraalo uu lahaa Osama Bin Ladin oo horey uga sii digay aasaaska Daacish
Dowlada Maraykanka ayaa Salaasadii shalay shaacisay qeyb kamid ah qoraaladii uu horey u qoray hogaamiyihii hore ee Al Qacida Osama Bin Ladin oo ay kasoo qaateen gurigii uu deganaa ee ku yaal dalka Pakistan.
Qoraaladan oo qeyb kamid ah Jariirada Washington Post kusoo qaadatay warbixin ay ka diyaarisay ayaa waxaa kamid ah Waraaqo uu Osama Bin Ladin u qoray qaar kamid ah hogaamiyayaasha kooxaha Al Qacida oo uga digayey inay ku dhaqaaqaan tilaabooyin burbur ku keeni karay shabakada Al Qacida.
Mid kamid ah qoraaladiisa ayuu Osama uga digay in ay kooxaha kamid ah Al Qacida inay ku dhawaaqaan Khilaafo isla markaana qabsadaan dhul balaaran isagoo tilaabadaasi ku tilmaamay mid ugu danbeyn guuldaro ku keenaysa awooda kooxdaasi. Wuxuu sidoo kale ka digay in la baahiyo sawirada foosha xun ee dadka la bireenayo iyo wixii lamid ah, dhamaan qoraaladan ayaa u muuqday kuwo uu horey uga sii digayey asaasaaska kooxda Daacish oo iyadu ka bilaabatay faracii Al Qacida ee Ciraaq ee ka goostay shabakadaasi.
Iran iyo Maraykanka
Qoraaladan ayaa waxaa sidoo kale kamid ahaa kuwo uu uga hadlayo dagaal weyn oo uu filayey Osama Bin Ladin inuu dhexmari doono dowlada IRAN iyo xulafada Maraykanka, isagoona qoraalo uu u qoray qaar kamid ah kooxaha Al Qacida ee dhaliila IRAN kula taliyey inaysan ku deg degin la dagaalanka IRAN.
Waraaqaha Osama Bin Ladin ayaa waxaa ku jiray kuwo uu qoray kahor weeraradii September 2001 iyo qoraaladii uu qori jiray waagii uu ku sugnaa dalka Sudan oo gacanta lagu qoray.
Dhaxal Dhaqaale $29 milyan
Waxaa kamid ah qoraalada uu ka tagay Osama waraaqo uu gacanta ku qoray oo uu ku faah faahinayey Lacag u taalay Bangi ku yaal dalka Sudan oo uu sheegay inay ugu kaydsan tahay lacag gaareysa 29 milyan oo dollar isla markaana qoraalkiisa ku xusay sida lacagtaasi ay Al Qacida u adeegsan karto marka uu dhinto.
Title: Maraykanka oo shaaciyey Qoraalo uu lahaa Osama Bin Ladin oo horey uga sii digay aasaaska Daacish